कागतीपानी पनि हुनसक्छ घातक, यस्ता व्यक्तिले पिउनै हुँदैन – Khabar Silo
एजेन्सी । सामान्यतः कागतीपानी पिउनु राम्रो मानिन्छ । तर केही मानिसलाई कागती पानी पिउनाले नोक्सान पनि पुर्‍याउन सक्छ ।यसले व्यक्तिको स्वास्थ्यसम्बद्ध समस्याहरूलाई झन् जटिल बनाउन सक्छ । कागतीमा पाइने केही तत्वले जसले त्यसम्बन्धी समस्यालाई बढाउनुका साथै दाँतमा समस्या निम्त्याउँछ ।
यस्ता ५ किसिमका रोग वा समस्या भएका व्यक्तिहरूले कागती–पानी पिउनु हुँदैन:
– कागती पानीमा एसिडको मात्रा धेरै हुन्छ । तसर्थ यस्तो पानी बढी पिउनाले एसिडिटी बढ्ने, मुटुको जलन, एसिड रिप्लक्स जस्ता समस्या बढ्न जान्छ ।
– पेटमा अल्सर भएको छ भने पनि कागती पानी नपिउनु राम्रो हुन्छ । यसले पेटमा दुखाइ र जलन निम्त्याउँछ ।
– जुन व्यक्तिको दाँतमा समस्या छ, कागती पानी पिउनाले दाँतमा भएको इनामेल हुन गई दाँत टुक्रिने वा सेन्सिटिभिटी बढ्ने जस्ता समस्या पैदा हुन सक्छ ।
– पिसाबसँग सम्बन्धित समस्या छ भनेपनि कागती पानी नपिउनु नै उत्तम हुन्छ । कागती पानी पिउनाले बारम्बार पिसाव लाग्ने हुँदा त्यस्तो समस्यालाई झन् प्रभावित गराउँछ ।
– कागती पानीले कफ र पित्त बढाउँछ । यदि व्यक्तिलाई कफ एवं पित्तको कुनै समस्या भए यस्तो पानीले अझ समस्या जटिल बनाउँछ ।
थाहा छ ? दन्त मन्जनले दाँत मात्र होइन् अनुहार पनि चम्काउँछ !
Posted on January 11, 2021 Author khabar silo
दन्त मन्जनले अनुहारको दाग हटाउछ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । दन्त मन्जनले त दाँत पो सफा गर्छ भन्ने सोचिरहनु भएको होला? तर यो अनुहारको कालो धव्बा हटाउनको लागि धेरै उपयोगी हुन्छ।पुरानो ब्रश नरम भैसकेको हुन्छ, त्यसैले यो गर्दा पुरानो ब्रस प्रयोग गर्यौं भने हाम्रो छालालाई हानी पुर्याउदैन। तर त्यो ब्रस आफ्नो अनुहारमा प्रयोग गर्नु अघि […]
तपाँईलाई थाहा छ ? टुसा उम्रेका गेडा-गुडीको झोल खानुका यस्ता छन् फाइदै-फाइदा हेरौं
Posted on July 1, 2021 Author khabar silo
गेडागुडी विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । यो हाम्रो भान्सामा पाकि’ने तरकारी पनि हो । गेडागुडी स्वा’दका लागि मात्र नभई स्वास्थ’का लागि पनि उतिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। गेडागुडीको रस खानाले हा’म्रो शरीरमा प्रोटिनको मात्रा धेरै हुन्छ । यो जो कोहिले पनि खान सक्छ य’सको से’वन गर्नाले रो’ग संग लड्ने क्षमता बृदि हुन्छ । गेडागुडी भन्ना:ले विभिन्न प्रका:रका दाल, […]
भद्रगोल पात्र विवादमा जिग्रीले भने, पात्र र चरित्र हाम्रो हो, हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं